Ukugqiba ukuba ngubani ophethe ipropati ye-intanethi ngokuqhelekileyo ulungele ngqo. Omnye uthabatha igama lokubhalisa igama lesizinda kwaye uyahlawula iifizi zokubamba. Nangona kunjalo, kukho iimeko zamatyala ezenza ukuba kucace ukuba abanikazi bewebhusayithi kufuneka baqaphele kakhulu ukuseka nokugcina ubunini babo bhulogi kunye namaphepha eendaba ezentlalo anxulumene nelo bhulogi.
Xa la maqela mabini aphelayo ubudlelwane bawo, uMorgan wabamba ulawulo lwe-akhawunti ye-LinkedIn kwaye wala ukuvumela i-Eagle ukuba ibe nolawulo kuyo, esithi yayiyinxalenye yepropathi yenkampani kwayehexa kwaye ngenxa.
Isigqibo kulo mzekelo sasinomdla, kuba iinkundla zifumene ukuba i-Aagle ngokwenene yenza i-akhawunti yakhe ye-LinkedIn. Nangona kunjalo, abazange banikeze umonakalo hergoko kwakungenakwenzeka ukubonakalisa nayiphi na ilahleko yengeniso ngenxa yokuthathwa kwe-akhawunti.
Unganiki nabani na ukuba afikelele kwiiakhawunti zaho zobuqu okanye zeshishini. Ukuba ufuna uncedo, tshintsha iphasiwedi yakho ngaphambi kokuphelisa ingqesho. Ukuba ungumqeshwa, yala nje ngentlonelo ukuba wabelane ngalolu lwazi.
SEO.com – Направи $ 5 долара.
Hotels.com – Le domain yazisa i- $ 11 yezigidi emva kwe-2001.
Kanye njegakwindawo ethengisa izindlu nomhlaba, amaxabiso anokwahluka kuye wonke umntu. Indlela olilinganisa ngayo ixabiso leblogi yakho ixhomekeke kwinjongo zakho zebhlog yakho. Kwindlu ethengiswayo, ixabiso lekhaya lilinganiswa ngabantu abafuna ukuthenga loo ndawo.
Umzekelo, enye usapho inokunyamekela ngakumbi ukuba kukho izikolo ezilungileyo kwindawo ngelixa enye ifuna inani elithile lokuhlamba. Umzekelo, ngaba ufuna ukufikelela kubafundi? Ke, umlinganiselo wakho unokuba ungakanani kubafundi abafunde kwaye baphendule kwizithuba. Нацистки ezinye zeendlela onokuthi ulilinganise ixabiso lebhlog yakho:
Ukwandisa абаTyeleli: Ukuqhuba ukugcwala kwi-blog yakho kunokuba lula ukuba uthethe kunokuba kwenziwe kwaye kuhlala kunesiphumo sezinto ezahlukeneyo. Погледнете в oya kuyifuna ukuyenza kukwandisa igama lomlomo. Xelela usapho kunye nabahlobo malunga nebhlog yakho. Thumela amakhonkco kwimidiya yoluntu. Uya kufuna kwakhona ukufunda isithuba sikaVishnu Supreet Ukhuthazwe ii-plugin ze-SEO KwiiWebhusayithi ze-WordPress kwi-2015 ukufumana ezinye iingcamango.
Ukwandisa ukuguqulwa kweentengisoUkufumana iindwendwe kwibhlog yakho kuphela kwesiqingatha sedabi. Ukuba ufuna ukwenza имате ibhlog yakho, ke kuya kufuneka ufumane abo bafundi ukuba bacofe kwikhonkco lokubhaliswa kweleta okanye utanyge uthenge imveliso. Funda isikhokelo esineenkcukacha sikaLuana Spinetti esineenkcukacha malunga nokuguqulwa kokwakha kunye nokunyaniseka okunesihloko I-37 Elements of Engagement User – UX, Ukuguqulwa, Ukunyaniseka ngeengcamanho kule ngengcamomago kule.
Ukwandisa usetyenzisoIphepha lokukhangela elingaphambili kuyo nayiphi na intambo yokukhangela kaGoogle linokubizwa ngokuba yi-real estate. Ukuba iwebhusayithi yakho ayinakubekwa kwindawo ezintlanu eziphezulu okanye ezintandathu kwindawo yakho ye-niche, ngokuqinisekileyo awuyi kufumana ukugcwala okukhulu kuGoogle. Ukonyusa inqanaba lakho lweinjini yokukhangela ngumsebenzi onzima. UGoogle utshintsha в abayifunayo phantse yonke imihla, emva kwayo yonke loo nto. Inye в esebenzayo ngoku kwaye enokuthi isebenze kwixesha elizayo, nangona kunjalo, kukubhala umxholo ogqwesileyo.
Йонгеза в енцша. Enye yezinto ezinzulu malunga nokuthenga indlu entsha ufumana ibhantshi elinamanzi elwandle okanye i-pool-in-ground. Ungayongeza njani ibumbi elisezantsi kwiwebhusayithi yakho? Yintoni into entsha kunye nokusika ongayongeza ukuba akukho mntu wenzayo okwamanje?
Ngeendlela ezininzi, ibhlogu ifana nearhente yokuthengiswa kwezindlu. Yinto oyityala има kuyo kwaye ufunde ukuyithanda ngokuhamba kwexesha. Ngokulandela le migaqo elula, uya kuphumelela ngebhlog yakho kwaye, ngandlela-thile, inokude ibe yeyona nto ibalulekileyo kuwe kunekhaya lakho.